vovonan’ny federasionan’ny olona manana fahasembanana eto Madagasikara fa tsy jeren’ny fitondrana mijoro amin’izao loatra koa ny momba azy ireo. Raha efa nisy mantsy teo aloha ny sampandraharaha na “direction” nandray an-tanana ireo olona manana fahasembanana teto amintsika dia nanjary naidina ho servisy indray izany. Voarakitra ao anatin’ny IEM, artikla faha-18 anefa, hoy Radafinintsoa Josoa ny fijerena akaiky sy fitsinjovana ireo olona manana fahasembanana. Nomarihiny manokana moa fa tena tsy afaka nandray anjara tamin’ny fifidianana nisesy notanterahian teto amin’ny firenena mihitsy ny ankamaroan’ireo olona manana fahasembanana na dia manana ny zony feno aza. Olana ny resaka lalana ho an’ireo manana fahasembanana ara-batana raha araka ny fanazavany, tsy fantatra ireo soratra amin’ny bileta tokana ho an’ireo jamba….